ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ တာဝန်ကိုယ်စီ - ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ တာဝန်ကိုယ်စီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈
Don't eat cran for awhile. - https://news.google.com/?hl=en-US&gl=US&ceid=US:en
Today isaBig Day in our History.
၈-၈-၈၈ တွင် ကျဆုံးခဲ့သော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူပြည်သား များ ကို ယနေ့ ၈-၈-၀၈ ၌၊ မပြောင်းလဲ သော နှလုံးသားဖြင့်၊ ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြု ပါ၏။
Labels: Burma History , Burma story , Free Burma